နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ ထုတ်ကုန်များ)
Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ များထဲမှ Changchun BCHT Biotechnology Co. ။
tag ကို: ဇီဝနည်းပညာနောက်ဆုံးအစုလိုက်ရေကျောက် , ဇီဝနည်းပညာ Long ကသက်တမ်းကာလရေကျောက် , ဇီဝနည်းပညာ Lyophilized ရေကျောက်
tag ကို: ဘိုင်အိုဆေးဝါးအစုလိုက်ဇီဝနည်းပညာ , ဘိုင်အိုဆေးဝါး gelatin အခမဲ့ဇီဝနည်းပညာ , ဘိုင်အိုဆေးဝါးတိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ
1.The ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးရေကျောက်ဖမ်းထံမှကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိသူကိုနီးပါးမည်သူမဆိုကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ရိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကျောက်ဟာရေကျောက်-zoster virus ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ဒါဟာအစ, အရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုခေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါကာကွယ်ဆေးကိုတစ်ဦး,...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation တိုက်ရိုက်၏ bulk
tag ကို: Active ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ Include , ရေကျောက် Zoster ဗိုင်းရပ်စ်နထေိုငျ , Oka strain အမျိုးအနွယ်
ရမှာပေါ့ကာကွယ်ဆေးအတွက်  အနိမ့် titer ၏ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမြင့်မား titer ကာကွယ်ဆေးနီးပါး 75% အားဖြင့်အောင်မြင်မှုများဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ BCHT ကနေရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအပေါငျးတို့သဖြန့်ချိအသုတ်, အ titers...
tag ကို: စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် , တစ်သင့်တော်တည်ငြိမ်ရေးများအပြင် , ဗိုင်းရပ်စ်ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား Lyophilized ဖြစ်ပါသည်
ပထမဦးဆုံးအကမ္ဘာပေါ်မှာသက်တမ်းကာလ၏ 36 လကြာအတူရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင် IP ကိုအခွင့်အရေးများနှင့်အတူ BH-2 stabilizer (တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အဘယ်သူမျှမပေးသနား .: ZL200910138411.6 နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာအဘယ်သူမျှမ .:...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated ၏ bulk
tag ကို: attenuation Varicella Zoster ဗိုင်းရပ်စ်၏ဝါဒဖြန့် , ရေကျောက်-zoster Virus ကို Oka strain , လူ့ Diploid ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု
တိရိစ္ဆာန်များကိုမခံမ gelatin င်ပထမဦးဆုံး lyophilized ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး, တီထွင်ခြင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကနေ gelatin ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရယူခြင်းသိသိသာသာှားပါးဖြစ်ပွားမှု၏အချိုးကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။...
tag ကို: ဘိုင်အိုဆေးဝါးဇီဝနည်းပညာဇီဝဗေဒ , ှားပါးအဖြစ်အပျက်များ၏အချိုးကိုလျော့ချ , BH-2 တည်ငြိမ်မှု Dopting
[Contraindications] (1) neomycin အပါအဝင်ဒီထုတ်ကုန်မဆိုမဲဆန္ဒနယ်မှလူသိများ hypersensitivity နှင့်အတူကျအောကျခံ။ (2) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အမျိုးသမီးများ။ (3) စူးရှသောရောဂါ, လေးနက်နာတာရှည်ရောဂါ, နာတာရှည်ရောဂါ,...
tag ကို: ကိုယ်ပိုင် IP ကိုခငြ့်အရေးနှင့်အတူ BH-2 တည်ငြိမ်ရေးကို , ယင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ် , 36 လများအတွက်သက်တမ်းကာလ
ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာတရားဝင်မှုကာလ ပထမဦးဆုံးအကမ္ဘာပေါ်မှာသက်တမ်းကာလ၏ 36 လကြာအတူရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင် IP ကိုအခွင့်အရေးများနှင့်အတူ BH-2 stabilizer (တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အဘယ်သူမျှမပေးသနား .: ZL200910138411.6...
ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး (Vero ဆဲလ်) ၏ bulk
tag ကို: တရားဝင်မှုကာလ 12 လ , ခွေးရူးပြန်ရောဂါတိရစ္ဆာန်များကိုက် , ခွေးရူးဗိုင်းရပ်စ်ကိုဆက်သွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ
(1) သည်ယခင်ကခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးသူတို့အဘို့ Boosters ၏ထောက်ခံချက်: ①အပြီးအစီး postexposure ကာကွယ်ဆေးထိုးအချိန်ဇယားကိုမကြာသေးမီကတစ်နှစ်အတွင်းကောက်ယူခဲ့သည်: တစ်သံသယခွေးရူးပြန်ရောဂါတိရိစ္ဆာန်ကိုက်လျှင်တစ်ဦးကထိုး, သီးခြားစီ,...
ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး Vero ၏ bulk
tag ကို: ခွေးရူးအောင်ကာကွယ်နိုင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ , အလင်း မှစ. Protected , ဒီထက်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှု
နှစ်ခုပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေ, သည်အထိနီးပါးခွေးရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူအားလုံးရောဂါကူးစက်မှုသည်သေခြင်း၌ဖြစ်ပေါ် လူးဝစ် Pasteur နှင့် Emil Roux ဤကာကွယ်ဆေးပထမကိုးနှစ်အရွယ်ပေါ်တွင်ဇူလိုင်လ 6, 1885 ရက်တွင်လူသားတစ်ဦးအပေါ်အသုံးပြုခဲ့သည် 1885...
ရေကျောက်များအတွက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation တိုက်ရိုက်၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated ၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ from China, Need to find cheap Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Bulk တိုက်ရိုက်ဇီဝနည်းပညာ, We'll reply you in fastest.